November 2021 – Page2– CELE WINGAGAR
လတ္ရွိထြက္ေပၚေနတဲ့ ယြန္းယြန္းရဲ႕သတင္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သူ႕စိတ္ထဲမွရွိေနတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို ထုတ္ေျပာလာတဲ့ အုပ္စိုးခန္႕
November 28, 2021 100million 0
ပရိသတ္ႀကီးေရ အခုလတ္တေလာမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္းနဲ႔ယြန္းယြန္းတို႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့ သတင္းေတြ အရမ္းကို ပ်ံ႕ႏွံ့ေနပါတယ္ေ နာ္။ စည္သူဝင္းဟာ ခ်စ္သူရွိရက္နဲ႔ ယြန္းယြန္ းကို ခ်စ္ေရးဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို ျ ပသနာေတြျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾက ာင္းအရာေတြကိုေတာ့ စည္သူဝင္းရဲ့လ က္ရွိ ခ်စ္သူေကာင္မေလးက ထုတ္ေျပာျပလ ာခဲ့တာ […]
မနေ့ညက အုပ်စိုးခန့်တင်တဲ့ My Day နဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဘုန်းမင်းနေလတင်တဲ့ My Day လေးအကြောင်း
မနညေ့က အုပျစိုးခနျ့တငျတဲ့ My Day နဲ့ ခငျဇာခွညျ ကြေျာ့သား ဘုနျးမငျးနလေတငျတဲ့ My Day လေးအကွောငျး ယှနျးယှနျးနဲ့စညျသူဝငျး တှဲတာ သိရတဲ့ စာတှေ ဖတျ ပီး ယှနျးယှနျးနဲ့ ရညျးစားဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အုပျအုပျ က သူနဲ့ ဖွဈ ခဲ့ဖူး တဲ့ […]
ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ကင်းကွာသွားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ဇရာထောင်းသွားတဲ့ အဆိုတော် လေးဖြူရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်လေးများ
အဆိုတော်‌ေလးဖြူကတော့ အသံပါဝါကောင်းကောင် းနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တော်တေ ာ်များများရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထ ားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူပါဝင်တဲ့ “Iron Cross” band ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လေ ာက်ကတည်းကနေ အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တေ ာ်တော်များများရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ရော့ခ် အဆိုတော် […]
ဆံပင်တုလေးနဲ့ ဘာဘီအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ပုံတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခ င်လွှမ်းတို့ နှစ်ဦးကတော့ ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထေ ာင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားပြီး ချစ်စ ရာကောင်းလှတဲ့ သမီးချောလေးတစ်ယောက် လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဖေဖေမေမေတို့ ရဲ့အချောတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သမီးလေး ကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်လှတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ […]
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သား အဖြစ် ခံယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးသမား ကိုကျော်ကျော်မျိုး
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားအဖြစ် ခံယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဘေ ာလုံးသမား ကိုကျော်ကျော်မျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိ.မ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီ းပြည်သူတွေကကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဓမ္မဘက်ကရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထ. မ်းတွေကတော့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အ နေနဲ့CDMလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပ ါတယ်။ အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်လာကြသူတွေထဲမှာကျေ ာင်းဆရာ၊ဆရာဝန်နဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအပြင်အ မျိုးမျိုးသောပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပါဝင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုလည်းဗိုလ်ချု ပ်ရုပ်ရှင်မှာဗိုလ်ချုပ်နေရာမှပါဝင်သရုပ်ဆောင်သေ ာဘောလုံးသမားလေးကျော်ကျော်မျိုးကတော့ စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်တို.က်ခို.က်ဖို့ကြိုးပ.မ်း‌နေတ […]
တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သင့် လုပ် ထိုက်တာတွေကို နောင်တ ရ စရာ မရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ပြောလာတဲ့ မင်းသမီးချော ဖွေးဖွေး
ဖွေးစိန်လေးက လူကညှက်ပေမဲ့ ပြောလိုက်ရင် ဒဲ့ တွေကြီးပဲ လုပ်သင့်တာ လုပ်ခဲ့ပြီမို့ နောင်တရစရာ မရှိပါဘူးတဲ့နော် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ် ခဲ့လို့ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူးဆိုတဲ့ အက ယ်ဒမီဖွေးဖွေးသရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးလို့အများက ချစ်စနိုးခေါ် ကြပြီးချစ်စရာကောင်း လွန်းလှတဲ့ အမူအရာတွေ ရယ်အမိုက်စားသရုပ် ဆေ ာင်ချက်တွေနဲ့အတူပရိတ်သတ်ကြီးတွေ ရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုက်အမာ ကြီးရရှိထား […]
မကြာခင် ကျင်းပတော့မယ့် မင်္ဂလာပွဲ လေးကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေအကူအညီနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြတဲ့ စိန်ဖြိုးနဲ့ ရီရီ…
November 27, 2021 100million 0
မကြာခင် ကျင်းပတော့မယ့် မင်္ဂလာပွဲလေးကို နားလည် တတ်ကျွမ်းသူတွေအကူအညီနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး အကေ ာင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြတဲ့ စိန်ဖြိုးနဲ့ ရီရီ… (Unicode ျဖင့်ဖတ်ရွုမရသည့် စာဖတ္ပရိတ်သတ္မ်ား အတြက် အောက္တြင် zawgyi ျဖင့် ဖော်ျပေပးထားပါသည်) သရုပ်ဆောင် စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ အတွဲ လေးကတော့ […]
မင္းသားဇာဏ္ခီ ေရးသားေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ Myanmar Plaza အတြက္စာတိုေလးတစ္ေၾကာင္း
ခ်စ္လွစြာေသာ႔ရိသတ္ႀကီးေရ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာ ကမွာ သက္တမ္းႏုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ရင္ ထဲကို ထိေရာက္စြာဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ခီေမာင္ႏွံတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ခရစ္စတီးနားခီ ကေတာ့ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မင္းသားတင္ရိုက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္က ဒါရိုက္တာလုပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့အိမ္ရွင္မေက ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. ခရစ္စတီးနားခီနဲ႔ ဇာဏ္ခီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ကား အနည္းငယ္နဲ႔တင္မတူကြဲျပားစြာ ထို းေျမာက္နိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့႐ုပ္ရွင္က ားေတြကို […]
မင်္ဂလာ လက်မှတ်ထိုးပွဲလေးအတွက် နန္ဒာလှိုင်ပေးတဲ့ အကြံအတိုင်းလုပ်လိုက်ရမလားလို့ ဟာသပြောလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်…
November 26, 2021 100million 0
မင်္ဂလာ လက်မှတ်ထိုးပွဲလေးအတွက် အတွေ့အ ကြုံရှိတဲ့ အမလတ်ဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင်ကို အကြံတေ ာင်းကြည့်ရာမှ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အ ကြံကြောင့် ရယ်ရခက် ငိုရခက်ဖြစ်သွားတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်… (Unicode ျဖင့္ဖတ္မရသည့္စာဖတ္ပရိတ်သတ္မ်ားအတြက် အောက္တြင် Zawgyi ျဖင့်ရေးသားဖော်ျပေပးထားပါသည် ) ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူက တေ ာ့ […]
မွေးနေ့အလှူလေး အနေနဲ့ YGW ဘိုးဘွားများစောင့် ရှောက်ရေးကျောင်းမှာ အလှူလေးပြုလုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမီကိုကိုကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထ ားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မ င်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မေမီကိုကိုရဲ့ အ သက် (၂၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့နေ့ ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေမီကတော့ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ မန္တလေးမြို့ အ ဝါရောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ပရဟိတအသင်း[…]